Posted by Maskaxda Xoree at 7:59 AM No comments: Links to this post
Qoraalkaan waxaan ku eegeynaa ilaaha wakiilka la dhaho maxamad soo dirsaday iyo in uu yahay ilaaha runta ah iyo in uu yahay ilaah maxamad ku qaraabto.
1. Naxariista ilaaha maxamad wakiilka u yahay
Maxamad quraankiisa wuxuu noogu sheegay in ilaahey uu wax walbo og yahay oo yahay ilaah naxariis badan oo cadaalad ah. Maxamad ma run buu ka sheegay?
Marka ugu horeysa ilaaha maxamad waa mid ogaa in uu cadaabi doono dadka asagoo aan abuurin dadka. Markaas ayuu suubistay cadaab asagoo ugu talagalay in uu dadka uu abuuridoono uu ku cadaabo cadaabtaas. ilaahaas ma ilaah cadaalad ah baa maadaama uu ogaa in uu cadaabi doono dadka.
"Waxaan u abuuray Jahannamo(cadaabta) wax badan oo jinni iyo insiba leh, waxayna leeyihiin quluub ayna wax ku kasayn, waxayna leyihiin indho ayna wax ku arkayn, waxayna leeyihiin dhago ayna wax ku maqlayn, kuwaasina waa xoolo oo kale. waana ka sii dhunsanyihiin, kuwaasina waa uun kuwa halmaansan." - waa aayada 179 ee suurata 7 (suurat al-acraaf)
"kuwii gaaloobay waxaa isugumid ah udigtayaa iyo umaadan diginaa mana rumeeyaan (xaqa). - waa aayada 6 ee suurada 2 (suurat Al-baqarah)
"Eebaa daabacay quluubtooda iyo maqalkooda. aragoodana wuxuu yeeley dabool waxaana u sugnaaday cadab weyn." - waa aayada 7 ee suurada 2 (suurat Al-baqarah)
ilaahaas oo ogaa in uu dadka cadaabi doono ma ilaah naxariis leh baa? Adiga hadii aad ogaan laheyn in qof tabar yar wadada yaala uu baabuur jiiri doono labo saac kadib waad ka badbaadin kartaa qofkaas in uu baabuur jiiro sababtoo ah waxaad og tahay hadii aad wadada ka qaadid qofkaas in uu baabuurka jiiri doonin hadii aad tahay qof naxariis leh. ilaaha maxamad dadka ma badbaadiyo sababtoo ah waa ilaah aan naxariis laheyn. Anagoo u jeedna naxariisdarada ilaaha maxamad, sidee buu maxamad noogu sheegi karaa ilaahey wuu naxariistaa? ilaahey ma labo wajiile baa?
2. Dabeecada iyo camalka ilaaha maxamad wakiilka u yahay
Maxamad wuxuu quraankiisa noogu sheegay in ilaahey uu yahay ilaah aad iyo aad u awood badan oo wax walba og. Wuxuu yiri ilaahey waa ilaah bini aadanka ka sareeya. Maadaama uu ilaahey bini aadanka ka fiican yahay waa sidee dabeecada ilaahey?
Ilaaha maxamad waa ilaah dabeecad xun oo xanaaq badan oo aad iyo aad u carooda sida bini'aadankii oo kale. ilaaha maxamad waa ilaah aan aad u caqli badneyn oo dadkuu abuurtay ayaa ka xanaajiya. ilaaha maxamad asaga oo ogaa in ay dadka ka xanaajin doonaan ayuu hadana xanaaqayaa. ilaaha maxamad sida bini'aadanka ayuu u xisaabtamaa oo iskama weyneysiiyo dadka uu abuurtay oo wuu ka aarsadaa markey ka xanaajiyaan. Quraanka ayuu maxamad noogu sheegayaa in uu ilaahey xanaaqo, aayadahaan hoose fiiri:
"markey nacara galiyeenna waan ka aarsanay xaggooda, waana maanshaynay dhamaan. - waa aayada 55 ee suurada 43 (suurat Az-zukhruf)
"saas waxaa ugu wacan inay raaceen kuwaasi wax Eebe ka caroodo, neceenna raalli ahaanshihiisa, markaasuu buriyay camalkoodii." - waa aayada 28 ee suurada 47 (suurat Muxammad)
Ilaahey haduu ogaa in ay dadka ka xanaajin doonaan muxuu ilaahey u xanaaqayaa? ilaahey ma isfiilito miyuu qabaa mase caqli la'aan ayaa heysa? ilaahaas soo maahan ilaah u dhaqma sida bini'aadanka oo kale maadaama ay dadka ka xanaajin karaan ilaahaas awooda badan? ilaahey wuu awood badan yahay iyo dadka ayaa ka xanaajiya wax isku meel gali kara maahan. Sidee dadka oo tabaryar aga xanaajinkaraan ilaahaas awooda badan? Maxamad ilaahey wuxuu ka dhigay sidii bini'aadankii oo kale oo wuxuu ka dhigay ilaah camal xun. Ilaaha runta ah maahan sida maxamad noo sheegay. Quraanka waa hadalkii maxamad ee maahan hadalka ilaahey.
3. ilaaha maxamad raga ayuu u eexdaa oo dumarka wuu yasaa
Ilaaha maxamad waa mid aad iyo aad ugu daran dumarka oo raga ayuu ka jecelyahay dumarka.
Aayadaan hoose waxey amreysaa raga in ay dumarkooda khaldama in ay guriga ku xiraan ilaa ay ka dhimaneyso.
"dumarka sineysta oo laqabo ku haya guridooda ilaa ay ka dhintaan" - waa yaadada 15 ee suurada 4.
ilaaha maxamad raga dhaxalkooda wuxuu ka dhigay labo jibaar markii loo eego dhaxalka dumarka. ilaaha maxamad ma oga miyaa in dumarka ay masaakiin yihiin oo raga ka xoog badan yahay? Hadii aabaha ama hooyada caruurta uu dhinto oo uu ka tago boqol doolar, gabadha waxey heleysaa 33 doolar wiilkana wuxuu helayaa 66 doolar oo dhaxal ah. cadaalad xumadaas bal u fiirso. Aayada dhaxalka raga iyo dumarka ka hadleysa waa aayada 11 ee ku jirta suurada 4 .
Aayadaan waxey amreysaa in ninka uusan si cadaalad ah ula dhaqmi karin naagihiisa, waa aayada 129 ee suurada 4.
ninka xaq wuxuu u leeyahay dhaxal u dhigma labo haween dhaxalkooda. Raga iyo haweenka ma sinna. waxaa sidaas leh aayada 176 ee suurada 4
Naagta ma furi karto ninkeeda laakiin, ninka naagtiisa wuu furi karaa markuu doono
quraanka wuxuu leeyahay, nibanka ayaa maamula dumarka oo nibanka way edbin karaan oo garaaci karaan naagahooda. waxaa sidaa leh aayada 34 ee suurada 4
naagaha ma guursan karaan nin aan muslim aheyn, laakiin nibanka way guursan karaan naag aan muslim ahayn.
naagaha safar kaligood ma aadi karaan ilaa uu ninkooda ama nin ehelkooda ah la socdo mooyee
Hal naag markhaati ma gali karto ayuu leeyahay quraanka oo markhaatiga labo naag ayaa u dhigma hal nin markhaatigiis markii maxkamad la joogo
ilaaha maxamad waa ilaah jecel raga oo haweenka uma jecla sida uu raga u jecel yahay. ilaaha maxamad waa ilaah leh dhaqankii carabta ee wagii hore. ilaaha maxamad hooyooyinka iyo walaalayaasheen wuxuu uga eexday raga. ilahaas ma ilaah cadaalad ah baa?
4. ilaaha maxamad dadka ayuu isku diraa oo wuu kala qeybiyaa
maxamad wuxu quraanka noogu sheegay in ilaahey uusan rabin in uu dadka mideeyo oo hal diin yeeshaan. ilaaha maxamad waa mid raba in uu dadka kala qeybiyo si ay isku dagaalaan. Aayadaan hoose fiiri:
Bal u fiirso caqli xumada aayadaan kor ku qoran. Aayadaan waxey leedahay ilaahey ayaa dhumiya dadka, waxey kale oo leedahay waa laydan warsan waxaad camal faleyseen. ilaaha intuu dhumiyo dadka hadana ku cadaabaya waxa ay camal falayeen soo maaha ilaah aan caqli laheyn sababtoo ah wuxuu leeyahay dadka ayaan dhumiyaa kadibna waxaan weydiiya waxey ii caabudi waayeen.
5. ilaahey wakiil ka socda oo carabi ku hadla miyuu u baahan yahay?
"Hadaan kayeelo kitaabka quraanka luuqad ajanabi ah waxay dhihi lahaayeen maxaa loo caddayn waayey aayaadkiisa, ma (quraan) ajanabi ah iyo Nabi (carabi ah), waxaad dhahdaa isagu kuwa rumeeyey wuxuu u yahay hanuun iyo caafimaad, kuwa aan rumeynina dhagahooda waxaa ah culays, waana ka indha la' yihiin kuwaasna waxaa looga yeeri meel fog." - Waa aayada 44 ee suurada 41
"Annagaana soo dejinay isagoo quraan carabi ah inaad kastaan" - Waa aayada 2 ee suurada 12 (suurat Yuusuf)
"Annagaa ka yeelnay quraan carabi ku soo dagay, inaad kastaan darteed." - Waa aayada 3 ee suurada 43 (suurat Az-zukhruf)
"Rasuul kuma dirro waxaan afka qoomkiisa ahayn si uu ugu caddeeyo, wuuna baadiyeeyaa Eebe cidduu doono inta xaqa loo caddeeyey ka dib, wuuna hanuunin cidduu doono, waana adkaade falsan." - Waa aayada 4 ee suurada 14 (suurat Ibraahiim)
Ilaahey hadii uu gumeyste raba in ay dadka caabudaan ahaan lahaa sida maxamad noo sheegay, ilaahey soo ma dirsan laheyn nin wakiil u ah oo carab ah oo af carabi kaliya ku hadla. Aayadaan kore waxay leedahay ilaahey quraanka wuxuu carabi aga dhigay inaad kastaan daraadeed. Maxamad in uu been noosheegayo waxaa lagu garan karaa, aduunka waxaa ka jira lix kun oo luuqadood ( 6,000 ). Maadaama ay dadka aduunka oo dhan aysan carabi ku hadlin, ilaahey ma caqliguu la'ayahay markuu leeyahay curaanka carabi ayaan ku soo dajiyay sidaad u kastaan darteed. Ma dadka oo dhan baa carabi fahmaya mase ilaahey carabta kaliya ayuu u soo dajiyay quraanka? Marka taas micnaheedu waxay tahay ilaahey wuxuu rabaa kaliya in ay carabta caabudaan maadaama ay fahmayaan wakiilkiisa oo ah maxamad iyo uuna aayadaas noogu sheegay in uu quraanka carabi ku soo dajiyay si ay dadka carabta ah u fahmaan quraanka. ilaahey hadii uu rabo in ay dadka oo dhan caabudaan muxuu u soo dirsaday wakiil carabi kaliya ku hadla, muxuuna u leeyahay quraanka waxaan ku soo dajiyay carabi si aad u kastaan daraadeed?
Ma og tahay in nibankaan isku sheega in ay nabi ilaahey soo dirsadey yihiin ay kuligood bariga dhexe (Middle East) kawada yimaadeen? sida nabi ibraahiim, ciise, maxamad iyo nabiyadii kale? Hadii uu ilaahey doonilahaa in ay dadka oo dhan caabudaan muxuu ilaahey nabiyadiisa oo dhan ay bariga dhexe loogu soo diray? Aduunka oo dhan ma bariga dhexe baa mase ilaahey wuxuu jecel yahay dadka bariga dhexe kaliya? Diimaha nabiyada wata oo ah Kirishtaanka, yuhuuda iyo islaamka waxay ka yimaadeen bariga dhexe, taas waxay ku tuseysaa in nibankaan isku sheega in ay yihiin wakiilada alle ay yihiin niban isku dayda oo quraafaad ku qaraabda sababtoo ah ilaahey hadii uu rabo in uu wakiilo soo dirsado kuligood hal gobol kama imaan laheyn hadii loo soo diray dadka dunida ku nool oo dhan.
Qoomkaan maxaa loogu soo diri waayay rasuul afkooda ku hadla?
Cunuga ku dhashay baadiyaha wadanka mareykanka ama jayna ama wadamo kale oo waligiis aan arag diin cid u sheegta oo sidaas ku kora oo sidaas ku dhinta asaga oo aan muslim aheyn, ilaaha ku cadaabaya maxaad muslim u noqon weysay, ilaahaas ma ilaah cadaal ah baa? Bal fiirso sawirkaan dhinaca bidixda yaala, ilaaha dadkaan sawirka ku jira u soo diray wakiil ka socda asaga oo carab ah oo carabi kaliya ku hadla, ma kula tahay in uu yahay ilaah caqli badan? ilaahey hadii uu rabi lahaa in ay dadka oo dhan caabudaan, qalbigooda ayuu ku beeri lahaa ee uma soo diri laheyn nin hal luuqad ku hadla oo carabi ah.
ilaaha runta ah maahan sida maxamad noogu sheegay quraanka ee waa ilaah sidaas ka fiican oo cadaalad ah oo naxariiste ah. Maxamad wuxuu iska dhigayaa in uu yahay wakiil ka socda ilaahey laakiin ilaaha runta ah uma baahna wakiil oo dadka ma gumeysto oo dadka kuma adoonsado in ay asaga caabudaan sababtoo ah waa ilaah aan caabudaad u baahneyn oo cadaalad ah. Quraanka waa erayada maxamad oo waa been cad.
Posted by Maskaxda Xoree at 9:06 AM 5 comments: Links to this post
Labels: barashada, boqolsoon, diinta islaamka, islam, muxaadaro, somali, somalia
Posted by Maskaxda Xoree at 7:38 AM 3 comments: Links to this post
Posted by Maskaxda Xoree at 12:34 PM 14 comments: Links to this post
Aayadaan waxay leedahay ilaahey gaalada ma hanuuniyo
Marka su'aashu waxay tahay sidee ayuu qof ku soo muslimi karaa sababtoo ah aayadaan ayaa waxay leedahay ilaahey gaalada ma hanuuniyo? Bini aadanka ma waxay suubin karaan wax aan ilaahey u ogalayn? Aayadaan waxay ku tuseysaa in quraanka uu qoray maxamad sababtoo ah waxay ka soo horjeedaa fikrada islaamka oo ah in dadka lasoo muslimiyo. Kala hadalka quraanka ayey ku tuseysaa. Hadii ay dhahaan ilaahey wuxuu hanuuniyaa ciduu doono, taas waxay ka soo hor jeedsaneysaa aayada kor ku qoran oo dhaheysa ilaahey ma hanuuniyo gaalada. Meeshas kala hadal ayaa ka imaanaya.
Maxamad mar wuxuu leeyahay waxaa la ii soo diray in aad dadka muslimiyo, marna wuxuu leeyahay ilaahey ma hanuuniyo gaalada. Marka ilaahey hadii uusan rabin in uu gaalada soo hanuunin sidee dadkii gaalada ahaa ku soo muslimeen? War wuxu caqli xumaa.
Posted by Maskaxda Xoree at 8:11 AM 4 comments: Links to this post
Labels: barashada, boqolsoon, dhaqan, diinta islaamka, islam, muxaadaro, somali, somalia
Aayadaan hoos ku qoran waxay leedahay ilaahey ma hanuuniyo kuwa islaamka ka baxay.
"Sidee u hanuunin Eebe qoom gaaloobay rumayn ka dib, oo qiray in rasuulku xaq yahay una yimaadeen xujooyin, Eebe ma hanuuniyo qoom daalimiin ah." - Waa aayada 86 ee suurada 3 (suurat Aali-Cimraan)
Aayadaan hoos ku qoran waxay leedahay waa la hanuuniyaa.
"Ha curur daaranina waad gaalowdeen rumayn ka dib, haddaan cafino koox inka mid ah waxaan cadaabeynaa koox illeen iyagu waa dambiilayaale." - Waa aayada 66 ee suurada 9 (suurat At-Tawbah)
Waxaa yaab ah in uu maxamad mar leeyahay qofkii gaal noqda ilaahey ma cafiyo marna leeyahay ilaahey wuu cafiyaa. Kalal hadalkaas waa mid aan caqliga galeeyn.
Posted by Maskaxda Xoree at 7:36 AM 5 comments: Links to this post